हुवावेको वाइनाइन एस स्मार्टफोन सार्वजनिक – Jaljala Online
Posted on December 16, 2019 Author Jaljala Online	Comment(0)
मंसिर २९, काठमाडौं । चिनियाँ स्मार्टफोन कम्पनी हुवावेको वाइनाइन एस स्मार्टफोन सार्वजनिक भएको छ। यो स्मार्टफोन मेट ३० प्रो सँगै सार्वजनिक गरिएको अर्को स्मार्टफोन हो।
अटो पपअप क्यामरा भएको यो स्मार्टफोन चर्चितत वाइनाइन प्राइम २०१९ को अपग्रेडेड भर्जन भएको कमपनीले जनाएको छ। आधुनिक र आकर्षित डिजाइन तथा अल्ट्रा वाइड एंगल ४८ एमपी एआई ट्रिपल क्यामरा तथा साइड फिंगरप्रिन्ट डिजाइन यसमा छ। हुवावे विश्वबजारमा दोस्रो ठुलो स्मार्टफोन सप्लायर हो। सन् २०१९ को जनवरीदेखि अक्टोबरसम्म २०० मिलियन युनिटहरू निर्यात गरिसकेको कम्पनीले जनाएको छ। यो आँकडा अघिल्ला वर्षको तुलनामा २६ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो।
त्यस्तै हुवावेको इकोसिस्टम उत्पादनहरूमा पनि वृद्धि भएको कम्पनीको भनाइ छ। कम्पनीका अनुसार पर्सनल कम्प्युटरको बिक्रीमा २१४ प्रतिशतले, ट्याब्लेट १० प्रतिशतले, स्मार्ट अडियो २६० प्रतिशतले तथा वेयरेबल उत्पादनहरूमा २७२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
मोबाइल सर्भिस, हुवावे डिभाइसेस, फाइभजी नेटवर्कहरू तथा एआईजडित एपहरू प्रयोग गरी उपकरणहरूलाई बिना कुनै समस्या कनेक्ट हनका सो खुला इकोसिस्टमले सम्भव तुल्याउँछ।
उक्त कार्यक्रममा बावेका प्रयोगकर्ताहरूका लागि सम्पूर्ण मोबाइल अनुभव प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएको हुवावे कन्ज्यूमर बिजनेस ग्रुपको एक हिस्सा हुवावे नेक्स्ट अर्थात् हुवावे मोबाइल सर्भिसेस एचएमएस को बारेमा प्रकाश पारिएको थियो। हुवावे नेक्स्टमा स्मार्ट, छिटो तथा समस्यारहित अनुभव प्रदान गर्नका लागि हुवावेद्वारा बनाइएको एप्लिकेशनहरू तथा सर्भिसहरू राखिएको छ।
हुवावे मोबाइल सर्भिसेसमा हुवावे एप ग्यालरी, हुवावे ब्राउजर, हुवावे मोबाइल क्लाउड वावे थिमहरू बावे म्यजिक बावे भिडियो, ह्वावें असिसटेन्ट तथा अन्य एचएमएस एपहरू हुवावे आइडी, हुवावे हेल्थ, हुवावे थिम, हुवावे म्यूजिक तथा अन्य धेरै रहेका छन्।
हुवावेले एचएमएस इकोसिस्टमका लागि एक वर्षभित्रै तीन अर्ब अमेरिकी डलर तथा तीन हजार रिसर्च एण्ड डिभलेपमेन्ट कर्मचारी परिचालन गर्दैछ भने दई वषभित्र उक्त लगानी रकम बढाएर पाँच अर्ब अमेरिकी डलर पुयाउँदैछ छ भने रिसर्च एण्ड डिभलेपमेन्ट कर्मचारी संख्या पाँच हजार पुऱ्याउँदैछ।
हुवावे मोबाइल सर्भिसेसको विश्वव्यापी बजारमा उपस्थितिलाई सुदृढ पार्न हुवावे इकोसिस्टम तयार छ। यसले ५७० मिलियनभन्दा बढी विश्वव्यापी प्रयोगकर्ताहरूलाई सेवा प्रदान गर्दछ। ह्वावे मोबाइल सर्भिसेसमा १.०७ मिलियन दर्ता भएका ग्लोबल डिभेलपरहरू रहेका छन् र एचएमएस कोरमा ५० हजारभन्दा बढी एपहरू एकीकृत भइसकेका छन् जसले स्वावेका सबै डिभाइसहरूमा कम्प्याटिबल हुने एपको भर्सन बनाउन सघाउँछ।
हुवावे मोबाइल सर्भिसेसमा संचालन हुने पछिल्लो फ्ल्यागशिप हुवावे मेट ३० प्रो, पनि सार्वजनिक गरिएको छ। यो आइकोनिक मोबाइलफोनमा किरिन ९९० एसओसी छ र ७ एनएम र इयूभी प्रोसेसको प्रयोग भएको छ। हुवावे स्परचार्ज तथा ईएमयूआई १० ले मोबाइल प्रयोगकर्ताहरूका लागि टिकाउ ब्याट्री तथा उत्कृष्ट अनुभव प्रदान गर्दछ। यो स्मार्टफोनले प्रयोगकर्ताहरूका लागि उच्च स्तरको फोटो र भिडियो खिच्न सघाउँछ। यसमा ४० एमपी सिने क्यामरासहितको उच्चस्तरको क्वाड क्यामरा प्रणाली, ४० एमपी स्परसेन्सिङ क्यामरा,८ एमपीको टेलिफोटो क्यामरा तथा थ्रीडी डेप्थ सेन्सिङ क्यामरा जडित छ। यसको फ्रन्ट क्यामरा ३२ एमपीको हो।
हुवावे वाच जिटी टु पनि अतिप्रतिक्षित हुवावे उत्पादन हो। किरिन एआई चिपजडित यसमा उच्च कार्यक्षमता तथा कम ब्याटी खपत गर्ने गर्दछ र दुई हप्तासम्म ब्याट्री टिक्छ।
४२ एमएम कलर एमोलेड स्क्रीनले २१५ एमएएच ब्याट्री प्रयोग गर्ने गर्छ जुन एक हप्तासम्म टिक्नेछ। यस स्मार्टवाचमा नयाँ विशेषताहरू र फङ्सनहरू छन् र १५ स्पोर्ट मोड तथा १० ट्रेनिङ मोडहरू भएको यो स्मार्टवाच फिटनेस तथा स्वास्थ्य बारे विशेष चासो राख्नेहरूका लागि उपयुक्त छ।
सो समारोहमा ब्यान्ड फोर तथा ब्यान्ड फोर ई पनि लन्च गरियो। हुवावे ब्यान्ड फोरमा भएको स्मार्ट फिटनेश म्यानेजमेन्ट सिस्टमले मटको धड्कन थप एक्यरेसीका साथ मनिटर गर्ने ९ वटा दैनिक इन्डोर र आउटडोर एक्सरसाइज मोडहरू भएको र सशक्त फिटनेश मनिटरिङ फिचरहरू छन्। यसका साथै हाले आयोजित आइएफए कन्ज्युमर इलेक्ट्रोनिक्स शो मा ११ वटा बेस्ट अफ आइएफए मिडिया अवार्डहरू जित्न सफल ह्यावे फ्रि बड्स थ्री टू वायरलेस ब्लटथ इयरफोनहरू पनि उपलब्ध भएको बारे घोषणा गरियो। किरिन ए वान चिपले उत्कष्ट साउन्ड प्रोसेसिङ टेक्निक प्रदान गर्न प्राविधिक रूपमा अत्याधनिक अप्रोच प्रयोग गर्छ।
हुवावे एक्सेसरिजको दनियाँमा अर्को दमदार उत्पादन भनेको ह्वावे फ्रि लेस हो जसले अद्वितीय अडियो अनुभव र टिकाउ ब्याट्री युक्त छ।
हुवावे मेट ३० पो सँगै सार्वजनिक गरिएको अर्को समार्टफोन हो वाइनाइन एय। अटो पपअप क्यामरा भएको यो स्माटफान चर्चित वाइ नाइन प्राइम २०१९ को अपग्रेडेड भर्जन हो। आधुनिक र आकर्षित डिजाइन तथा अल्टा वाइड एंगल ४८ एमपी आई टिपल क्यामरा तथा साइड फिंगरप्रिन्ट डिजाइन यसमा छ।
हुवावे विश्व बजारमा दोस्रो ठुलो स्मार्टफोन सप्लायर हो र सन २०१९ को जनवरीदेखि अक्टोबरसम्म २०० मिलियन यनिटहरू नियांत गरिसकेको छ। यो आँकडा अघिल्ला वर्षको तुलनाम २६ प्रतिशतले वद्धि भएको हो। त्यस्तै हुवावेको इकोसिस्टम उत्पादनहरूमा पनि वृद्धि भएको छ जस्तै पर्सनल कम्प्युटरको बिक्रीमा २१४ प्रतिशतले, ट्याब्लेट १० प्रतिशतले, स्मार्ट अडियो २६० प्रतिशतले तथा वेयरेबल उत्पादनहरूमा २७२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
कम्पनीको कुन उत्पादनको मूल्य कति?
हुवावे मेट ३० प्रोः १ लाख २९ हजार ९ सय
हुवावे वाच जीटी टु ४६ एमएमः २९ हजार ९ सय
हुवावे ब्यान्ड फोरः ४ हजार ४ सय
हुवावे ब्यान्ड फोर ईः ३ हजार ४ सय
हुवावे फ्रि बङ्स थ्रीः २० हजार ९ सय
हुवावे फ्रि लेसः ९ हजार ९ सय
हुवावे वाच जीटी टु ४२ एमएस र हुवावे वाइ नाइन एसको भने मूल्य घोषणा हुनै बाँकी छ।
Posted on June 19, 2019 Author Jaljala Online
असार ४, काठमाडौं । अहिले सांगीतिक बजारमा लोकप्रिय लोकगायिका विष्णु माझी सार्वजनिक हुने ‘गसिप’ चलिरहेको छ। यो खबर हामीले नेपाललाइभबाट लिएका हौ, १० वर्षभन्दा बढी समयदेखि ‘मिडिया’सँग लुकेकी यी गायिका भौतिक रुपमा बाहिर आउँदा कसरी सार्वजनिक होलिन्? कस्ती भइसकेकी होलिन्? उनले धेरै वर्षपहिले दोहोरी गाएको भिडियो क्लिप युट्युबमा देखिन्छ, जहाँ उनी अलि लजालु स्वभावकी प्रतित […]
आज वर्षा कस्ताे हाेला ? यस्ताे छ ३ दिनको मौसम पुर्वअनुमान
Posted on July 28, 2019 Author Jaljala Online
साउन १२, काठमाडौं । आज (आइतबार) देशभर बदली हुने तर केही स्थानमा मात्र वर्षा हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाकी मौसमविद् विभूति पोखरेलका अनुसार आज कतै त्यस्तो ठूलो वर्षा हुने सम्भावना छैन। देशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यसम्म वर्षा हुने संकेत देखिएको उनले बताइन्। ‘तैपनि वर्षाको मौसम हो, पहाडी क्षेत्रतिर सामान्य वर्षाले पनि पहिरो जाने […]
Posted on December 15, 2019 December 15, 2019 Author Jaljala Online
भोली मिति २०७६ साल मंसिर महिनाको ३० गते सोमबार रहेको छ । मेष-रक्तचाप विरामीहरुले खासगरी आफ्नो स्वास्थ्यको अतिरिक्त ध्यान राख्नुपर्छ। आमाबाबुको सहायताले गर्दा वित्तीय बाधाहरु टर्दै गएको जस्तो देखिन्छ। सकारात्मक र सहयोगी साथीहरूसँग बाहिर जानुहोस्। आफ्नो प्रियसँग सानो छुट्टी मनाइरहेकाहरूको लागि अत्यधिक स्मरणीय समय हुनेछ। आज तपाईंले आफ्नो जोडीका प्रेमको चरम देख्नु हुनेछ। वृष-पाईंले आफ्नो […]